Horseed iyo Dekadda oo isku Garab dhacay & Banaadir SC oo maanta Fursad u heysata in ay 1 dhibac u jirsato hoggaanka | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Horseed iyo Dekadda oo isku Garab dhacay & Banaadir SC oo maanta Fursad u heysata in ay 1 dhibac u jirsato hoggaanka
Horseed iyo Dekadda oo isku Garab dhacay & Banaadir SC oo maanta Fursad u heysata in ay 1 dhibac u jirsato hoggaanka
Kooxda Dekadda ayaa ka badbaadday Khasaare kale oo ay kala laaban laheyd Tababaraheedii hore ee Cabdi Joon, keddib markii ay Goolka Garabdhaca oo soo daahay dhaliyeen Daqiiqadihii 80-aadka ee kulankii Horseed.
Ciyaarta labada kooxood waxaa sida badan ku gacan sarreysay Horseed, taasoo dhalisay Goolasha Kulanka loo maleynayay in uu kusoo dhammaan karo.
Horseed ayaa waxay ciyaarta ilaa 84 daqiiqo ku hoggaamineysay 2-1, in kastoo daqiiqadihii u dambeeyay ee kulanka ay kooxda Dekadda u suuragashay in ay helaan Goolka Garabdhaca ee ciyaartaas.
Kulankii Labada Naadi ayaa kusoo dhammaaday 2-2, waxayna taasi Fursad weyn u tahay kooxda Banaadir SC oo maanta la ciyaari doonta dhiggeeda Madbacadda Qaranka, kulankaas oo haddii ay adkaato ay ugu dhowaan karto hoggaanka horyaalka dalka, Horseedna ay uga dheeraan karto.
Banaadir SC Haddii ay maanta badiso waxay 1 dhibac u jirsan doontaa hoggaanka horyaalka dalka, taasoo u muuqata in Sanadkan ay ku guuleysan karto horyaalka, si ay meeshana uga saarto in horyaalku laba sano oo isku xigta uu aado kooxda Dekadda.